Static Webhusaiti Ndeapi mabhenefiti avo? | Linux Vakapindwa muropa
Static Webhusaiti Ndeapi mabhenefiti avo?
Kutevera na kuverenga kwedu yeanobatsira akavhurwa sosi maturusi evamabhizimusi, isu tinopa iyo inotevera chinyorwa kune static webhusaiti majenareta. Asi, maitiro ekutsanangura kubatsira kwayo kwakaomarara, Tiri kuzotsaurira posvo kuti utsanangure kuti ndeupi musiyano wayo nevatungamiriri vezvakajairwa zvemukati uye zvakanakirei
Ini ndinotanga nekujekesa kuti ini handina kana chinhu chinopesana necustoms zvemukati mamaneja. Muchokwadi, ini ndinovashandisa zuva nezuva. Muchokwadi, kana iwe urikutangisa pachiyero uine bhajeti shoma uye uine zvinhu zvakati wandei zvekuenda nazvo panguva imwe chete, pamwe ungangoda kuzvishandisa.
1 Static Webhusaiti Ndezvipi izvo?
2 Kubatsira kwema static mawebhusaiti
2.1 Zvishoma zviwanikwa
Static Webhusaiti Ndezvipi izvo?
Rega ndijekese izvi nemuenzaniso.
Linux Vakapindwa muropa, semamiriyoni emamwe masayiti kutenderera pasirese, inoshandisa maneja wezvemukati anonzi WordPress. Iyo WordPress kodhi base yakangofanana pane ese masayiti anoshandisa yakafanana vhezheni.
Nguva dzese iwe paunopinda portal, sevha inobvunza mudhatabhesi kuti ndezvipi zvirimo zvekukuratidza. Izvi zvirimo ndizvo zvinoita kuti Linux Kupindwa muropa kubva kuAdd Cars kana Akapindwa Matishu akasiyana. Mune iyo imwecheteyo dhatabhesi mune ruzivo nezve izvo zvemukati zvaunokwanisa kuwana zvinoenderana nerudzi rwemushandisi iwe uye kuti ruzivo rwunoratidzwa sei zvichienderana nerudzi rwekuenda mudziyo.
Kubatsira kwema static mawebhusaiti
Kumhanyisa akajairika zvemukati maneja iwe zvaunoda:
Muchina unomhanya uchishandisa sisitimu.
Webhu sevha inomhanya Apache, Ngnix kana zvakafanana.
Iva nePHP uye kuwedzerwa kwayo kuiswa uye kugadziridzwa zvakanaka.
Injini yedhatabhesi yakatsigirwa.
Iye akasarudzwa zvemaneja maneja.
Ese mawedzero-uye mamwe madingindira aunoda.
Unogona kunditenda kuti kuita zvese izvi kushanda mukuwirirana ibasa rakakodzera juggler. Sarudzo yaunofanirwa kutora ndeyekuti iwe unozviita iwe pachako kana kana iwe ukabhadhara mumwe munhu kuzviita. Iko kune zvakachipa webhu inomiririra uye kune akanaka webhu anomisikidza. Iko hakuna izvo zvinosangana zvese zviri zviviri mamiriro. Uye, kunyangwe kana wako wekutambira mupi achitarisira kuve neyekutanga zvinhu zvishanu zvakagadziridzwa uye zvichishanda, mukana wekuti plugin kana dingindira rinotyora chimwe chinhu chisipo.
Zvemukati mamaneja zvemaneja zvinonyanya kugadziriswa, uye zvine mazana ezviwedzero-zvinovatendera kuti vaite chero chinhu. Asi, iwe unopedza nguva yakawanda uchibvisa izvo zvausingade. Uye, zvinonyanya kufadza mawedzero-anobhadharwa (uye anodhura kwazvo)
Uine static webhusaiti jenareta unogona kugadzira saiti ine izvo chete zvaunoda uye nekuishandura zviri nyore pazvinenge zvichidikanwa
Dambudziko nevatungamiriri vezvakakurumbira zvemukati zviri izvo chaizvo, ivo vanozivikanwa kwazvo. Nemazana ezviuru emitsetse yekodhi zviri nyore kwazvo kuita zvikanganiso. Uye, izvo zvikanganiso zvinoshandiswa neve cyber tsotsi.
Zvakakosha kuchengeta izvi mupfungwa. Saiti haifanirwe kunge ichizivikanwa kuti ive nyajambwa weiyo cybercrime. Makore apfuura, vachitora mukana wekushupika mune maneja wezvemukati, ivo vakashandisa imwe yemawebhusaiti angu kubiridzira vatengi veNorth America bank.
Mune mamwe mazwi, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvese izvo zvinhu zvataurwa pamusoro zvasvika parizvino (uye namatira kuti ivo vanogadzira vaone kusagadzikana pamberi pematsotsi)
Kana dhatabhesi haigone kuchinjwa sezvo isiri kushandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Static Webhusaiti Ndeapi mabhenefiti avo?
Delio Orozco Gonzalez akadaro
Nzvimbo dzesisitimu dzinobatsirawo kana iwe uchida kuendesa ruzivo munzvimbo inonamira kana kubatana kwacho kuchinonoka kana kusipo. Semuenzaniso, inotakurika vhezheni yeWikipedia inosangana nechinodiwa ichi; Mune mamwe mazwi, inopa ruzivo uye ruzivo pasina chikonzero chekubatana neInternet.
Pindura kuna Delio Orozco González
Ndatenda nekutaura kwako. Mupiro wakanaka
Ini ndanga ndichangobva kuyedza naBashblog asi zvinoita kwandiri kuti zvinyorwa zviripo zvidiki kwazvo ...
NaPelican ndakaita zvirinani asi izvo zvandinofunga zvakakosha ndedzakawanda nenziyo nziyo, zhinji dzenziyo dziripo ndedzekare zvikuru.
Sayenzi Linux 7.9 inosvika neOpenAFS, yum-cron uye nezvimwe
Mapurogiramu matatu ekuzvinyorera isu